Banyere Anyị - Shenzhen Ụtọ Technology Co., Ltd.
Dị ka mgbe niile, Ụtọ ekwusi on "Action na-ekwu okwu karịa okwu ọnụ" dị ka ya ika azụmahịa philosophy.Shenzhen ọṅụ juru Technology Co., LTD. a ọkachamara Ikanam ngosi na-eweta ọrụ, e guzobere 2007 na a aha isi obodo nke ihe karịrị $ 10 Nde. Ụtọ dị na Lilan Technology Park na Gongming Street, Guangming District na mpaghara 3000sqm. Ebe ọ bụ na ya inception, Ụtọ nọ eto ngwa ngwa; Ngwaahịa nke Ụtọ na e rere ihe karịrị 100 mba na mpaghara ...
Arụsi ọrụ ike, na ịbụ a magnanimous man.We e tinye n'ọrụ elu teknụzụ na-achụ ọhụrụ na-emepụta nke kacha mma mma ngwaahịa, na banyere bụla iji dị ka anyị efu oru ngo. Iji mee ka anyị ngwaahịa zuru okè, anyị na-ewebata ihe ndị kasị elu mmepụta equipments na ịchọputa ụlọ ọrụ, N'ihi ya, dị ka ịnọgide na-enwe a na nlezianya quality ụkpụrụ nke ọ bụla mmepụta usoro. N'ihi mgbalị ndị, anyị na-gafere ọtụtụ asambodo, dị ka, OA, CCC, FCC ihu ọma wdg
Ụtọ ngwaahịa mma management a nditịm n'ịgbaso ihe ISO9001: 2008 certifications usoro na 7S management standard.To achọ ka ukwuu okè, bụ nke na-akpa mmetụta dị ukwuu Standardization of Ikanam ụlọ ọrụ. N'ebe a, anyị na-ekwe nkwa na ọ bụla ahịa, ọ bụla iji na bụla nzaghachi ga-kpọrọ site Ụtọ. Ka anyị aka na aka, banyere "na-egosi ịma mma nke ụwa" dị ka anyị bịara, na-eke a ọzọ yi na mma ụwa.